I-BAKHAR NABIEVA WIKI BIOGRAPHY, UBUDALA, IMILINGANISELO, UBUZWE, IKHAYA - IINDABA
Ngubani uBakhar Nabiva?
U-Bakhar Nabiva wazalwa nge-8 ka-Epreli 1994 e-Baku, eAzerbaijan, kwaye ungumakhi womzimba ukongeza kwimithombo yeendaba zentlalo eyaziwayo ngengeniso yodumo kwiwebhusayithi yemidiya yoluntu e-Instagram, athe wasebenza kuyo Wathumela imifanekiso emininzi yabucala ebonisa. . Uyaziwa ngokukodwa ngenxa yomzimba wakhe omkhulu womzimba onokuthi ulwe nabesilisa abaninzi.
Ubutyebi beCopper Nabiva
Usisityebi kangakanani uBakhar Nabiva? Kwasekuqaleni kwe-2019, imithombo yolwazi ixele kuthi ixabiso elikwi-Intanethi, elifunyenwe ngumsebenzi onenzuzo kwezempilo nakwimithombo yeendaba zentlalo. Udumo lwakhe lwe-intanethi lwamazisa ngeendlela ezininzi kwaye wongeze isandla sakhe kukhuphiswano lokwakha umzimba. Njengoko eqhubeka nokuzama kwakhe, kulindeleke ukuba ubutyebi bakhe buqhubeke nokukhula.
Ubomi bokuqala kunye nempilo
Idatha ethintelwe kakhulu inikezelwa malunga nobuntwana bukaBakhar kunye nendlu yakhe. Kucingelwa ukuba wakhulisa umdla wakhe kwezempilo esemncinci, xa wayefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ngexesha lakhe, wayehlala ekhuthazwa kwaye ehlaziswa ngokuba nomzimba oqinileyo, okwamkhokelela ekubeni abethe uJim ukubonisa inkunzi yakhe engalunganga.
Ngexesha leseshoni yakhe yokuqala yokuzivocavoca, wayengazi nto malunga nempilo kunye noqeqesho kwaye wayengazi ukuba makenze ntoni ukuzabalazela oomatshini abohluke ngokupheleleyo. Ekugqibeleni, wafumana ukungena kwiimagazini zokwakha umzimba, ezamenza ukuba andise ulwazi. Uninzi lweendlela zakhe zempilo ziyazifundisa, kwaye ukuqonda akufumene kula maphephancwadi kwamnceda kakhulu kuhambo lwakhe lomthambo. Xa ekuqaleni wayengakhuthazwa ngokupheleleyo, eyona nto yayisenzeka kuye kuxa wayeqala ukuqaphela uhlengahlengiso emzimbeni wakhe, olwamenza ukuba aqhubeke neethagethi zakhe zempilo.
Ukunyuka uye kudumo
Emva kokuba lilungu lewebhusayithi ye-intanethi ye-Instagram, uNabiva waqala ukufezekisa kwaye waqala ukuthumela iifoto ezibonisa umzimba wakhe. Inkonzo ephethwe nguFacebook ivumela abathengi ukuba bongeze iimuvi kunye nemifanekiso, ezinokuthi zihlelwe ziifilitha, kwaye zilungiselelwe ukuba zabelane esidlangalaleni okanye abalandeli abamkelwe kwangaphambili; Abasebenzisi banokukhangela imifanekiso ngeendawo kunye neethegi. Emva kokumiliselwa kwewebhusayithi, I-Instagram U-2017 ukhule ngokuqaphelekayo kwaye ukusukela ngo-2017 unabathengi ababhalisiweyo abangaphezulu kwezigidi ezingama-800. Indawo yewebhu iye yongeza kwisabelo sayo, ikakhulu inxulunyaniswa nohlengahlengiso lwayo.
Ukusukela ngokuthumela Iiakhawunti , Ngephanyazo lafumana inani labalandeli, ngoku elifikelela ngaphezulu kwezigidi ezi-2.4. Ubonisa umzimba wakhe ikakhulu ngemifanekiso bhanyabhanya. Ukongeza kwigama lakhe elikwi-intanethi, wathetha ngento yokuba uyakhuphisana ngaphakathi kwiklasi yezempilo ye-bikini njengomakhi womzimba onolwazi, nangona kunjalo ayisiyiyo enye into anokuthathwa nayo kakhulu. Enye injongo ayithandi ukhuphiswano kungenxa yezithintelo ekudleni. Ngokwenjenje uya kuba nakho ukunciphisa amandla akhe ngenxa yokuba akazukufumana ukutya okufanelekileyo okufunekayo kuqeqesho.
Kucingelwa ukuba uBakar ngumqeqeshi wokujongana namaqela emisipha awathandayo ubukhulu becala. Wathetha ngento yokuba uyathanda ukuqeqesha iinzwane zakhe, kwaye ngenxa yeli nani inani lokuzilolonga lijolise kuye, kunye neziqhelo ze-quads zakhe, imisipha kunye ne-glutes. Eyona misebenzi ibalulekileyo kukwandiswa komlenze, ukucofa umlenze, izikwere kunye nokusebenza ngokuzimela, usebenzisa ubunzima nokwenza malunga nokuphindaphinda kwe-6-15 kuxhomekeke kuloliwe. Ukonwabela ukusebenza ngokuzimeleyo.
Kuba akanguye umlandeli omkhulu wesicwangciso sokunciphisa ubunzima, uhlala enenkqubo yokunciphisa ubunzima, edla inyama, amaqanda kunye neetruffles. Ngokutsho kwakhe, ukutya kwakhe ukutya ngaphandle kwamathandabuzo sesinye sezizathu zokuba akulungele ukwenza ngempumelelo. Uhlala esebenzisa amandla ongezelelweyo kwimihla yokuzilolonga enceda ekuthinteleni nakuphi na ukugcinwa kwamafutha okungafunekiyo. Udumo lwe-Intanethi lumkhokelele ekubeni axhaswe yinkampani yaseCanada i-Dragon Pharma, ejolise ekwakheni izongezo zokutya zomzimba ukongeza kwisinxibo nakwizixhobo. Ungomnye kubo bonke abadlali bezempilo kunye neemfashoni ezixhaswe yiwebhusayithi. Ngenxa yoku, uthumela inani lezithuba ezixhasiweyo, ezimncedayo ukuba afumane enye ingeniso kunye nentengiso kwimithambo yakhe.
Iinjongo ezingathandekiyo ma? Ndizakukrazula ikhala ebusweni bakho! pic.twitter.com/TeKgkjESzk
-Nabiva Bakhar (@NabievaBakhar) Nge-26 kaFebruwari 2014
Ngobomi bakhe babucala, akukho nto ingako icingelwayo ngobudlelwane bothando bukaNabiva; Uyakwazi ukugcina le nkalo yobomi bakhe kude nezihloko. Ukhankanya isidingo sakhe sokuqalisa umzi ngaxa lithile, njengoko ethumele iifoto zamakhaya anomama notata womzimba. Njengamafashoni amaninzi ezempilo, ugcina ubukho obunamandla kwi-intanethi ngokufaka okuqhelekileyo kwiakhawunti yakhe ye-Instagram. Iinyanga zamva nje zibone ukuphucuka okungaphezulu komzimba wakhe, kwaye usandula ukuva isihloko seFreak, ezemidlalo iilensi zonxibelelwano ezinkulu ukufanisa umzimba wakhe omkhulu.
Ukongeza kwiakhawunti yakhe ye-Instagram, ukongeza ugcina ijelo le-YouTube elinababhalisi abangaphezulu kwe-17,000. Ubhala ikakhulu iimuvi ezinxulumene nokwakha umzimba nangona iqulethe iintlobo ezahlukeneyo zeemovie. Uneblog yevidiyo (vlog) yeefom zezithuba kunye neenketho ezahlukeneyo zabakhi bomzimba ababhinqileyo kwisitishi sakhe. Ngelixa eposa rhoqo kwisiteshi sakhe, ibingasebenzi kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Ucingelwa ukusebenzisa igama lakhe elikwi-intanethi kunye nomzimba ukuze afumane amanye amashishini kunye nabaxhasi bakhe. Nangona kunjalo, ngaphandle komsebenzi wakhe Inyoka Pharma Akakhange atyhile amanye amanyathelo amatsha.
ngolwesiHlanu umhla wokukhutshwa
usuku lwesikhumbuzo somthi wedola
I-starbucks ivuliwe ngomhla wesikhumbuzo
ubudlelwane be-carmen electra inkosana
oye wasuswa kwi-agt
ukumkanikazi iswekile isiqendu 9